सेल्फी : सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्नेमा पुरुष भन्दा महिला अत्यधिक सक्रिय « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०७५, शुक्रबार २०:४३
काठमाडौं । विश्वको सर्वाधिक सुन्दर स्थानमा जानुहोस्, त्यहाँ तपाईं मानिसहरूले आफ्नै तस्बिर लिइरहेको देख्नुहुनेछ। हामीलाई यो नयाँ कुरा हो भन्ने लाग्न सक्छ। किनभने सेल्फी भन्ने शब्दलाई अक्स्फर्ड शब्दकोषमा सन् २०१३ मा मात्र समावेश गरिएको थियो। त्यो शब्द त्यस वर्षको ‘वर्ष शब्द’ पनि बनेको थियो।
यद्यपि सेल्फीहरू फोटोग्राफी जत्तिकै पुराना हुन्। सन् १८३९ मा रोबर्ट कोर्निलियस नामक एक अमेरिकी पुरुषले पहिलो सेल्फी तस्बिर खिचेका थिए। हामी स्नानगृहमा राखिएको ऐनामा आफैँलाई हेर्दै प्रत्येक बिहान आफ्नै प्रशंसा गर्न सक्छौँ भने किन सेल्फी खिच्छौँ त ? यो कुरा अलिकति विचित्रको लाग्दैन त ?
मानवजातिको विशेष खालको व्यवहारबारे मनोविश्लेषक सिग्मन्ड फ्रोयडले जस्तो व्याख्या गर्न अरू कसले सक्ला र ? मनोविश्लेषण फ्रोयडले अचेतन तथा मनोवैज्ञानिक थेरापी गर्ने जस्ता कुराहरूलाई प्रख्यात बनाएका हुन् ।
उनी भन्छन्, अत्यधिक आत्मानुराग पनि त्यसमध्येको एक हो। त्यसलाई ‘नार्सिसिजम’ भनिन्छ। अर्का बैज्ञानिक ग्रीक मिथकको आफ्नै प्रतिविम्बसँग प्रेम गर्ने नार्सिससको वर्णन छ ।
कसैले अरू सबैलाई छाडेर आफैँलाई मात्र प्रेम गर्ने अवस्था आयो भने त्यो मनोवैज्ञानिक समस्याका रूपमा रूपान्तरण हुन पनि सक्छ। त्यसलाई हामी नार्सिसिजम भन्ने गर्छौँ। नार्सिसिजमजस्तै व्यक्तित्त्वको विशेषताहरू मापन गर्न मनोवैज्ञानिकहरूले परीक्षणको विकास गरेका छन्।
महिलाहरू पुरुषभन्दा कम नार्सिसिस्ट हुन्छन् पुरुषको दाँजोमा धेरै सेल्फी पोस्ट गरे पनि महिलाहरू चाहिँ पुरूषभन्दा कम नार्सिसिस्ट हुने गर्छन्। अर्कोतर्फ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जीन ट्वेन्गीले पछिल्ला दशकहरूमा मोटोपनको समस्याजसरी नै नार्सिसजम बढेको देखाएका छन्।
फ्रोयडका धेरैजसो विचारहरू उनको दैनिक निरीक्षणमा आधारित थिए। आज हामी जुन सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ, ती सूचनाहरू उनी जस्तैका लागि धेरै नै रुचिको विषय हुनसक्छन्। स्वाभाविक रूपमै उनले सेल्फी प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्न मन पराउने थिए।
धेरै मानिसहरू आफूलाई प्रेम गरेर होइन, अरूले आफूलाई प्रेम गरून् भन्ने इच्छाका कारण सेल्फी पोस्ट गर्छन् भन्ने कुरा उनले पनि थाहा पाउने थिए।
ध्यानाकर्षण गर्ने मोह
यौनबारे समाजमा खासै खुलेर कुरा नहुने बेला १९ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर फ्रोयडले अनुसन्धान थालेका थिए भन्ने हामीले बिर्सनुहुँदैन।त्यस समयमा महिला र पुरुषलाई भिन्नै राखिन्थ्यो । उनीहरूलाई यौनिकताको प्रदर्शन गर्दा बेइज्जत हुने र त्यसमा रमाए दुराचारी भइन्छ भनेर सिकाइन्थ्यो।
फ्रोयडका धेरै बिरामीहरू भिएनाको उच्च वर्गका ‘हिस्टेरिकल प्यारलिसिस’ भएकाहरू हुने गर्थे। कुनै स्पष्ट शारीरिक दुर्बलता नभए पनि उनीहरू हिँड्न सक्दैनथे। हिस्टेरिया हुँदा महिलामा अनिद्रा, अधीर हुने प्रवृत्ति, सन्ताप आदि लक्षण देखा पर्छन् । फ्रोयडलाई ती महिलाहरू ध्यानाकृष्ट गर्न नहिँडेका हुन् भन्ने लाग्थ्यो।
यदि अरूको ध्यानाकृष्ट त्यसरी गर्नुपर्थ्यो भने केही निर्लज्ज सेल्फीहरू शेअर गर्नु त्योभन्दा उत्तम होइन र ? सम्भवतस् हो। तर यो मोहमा अस्वस्थकर पक्ष छैन भन्ने चाहिँ होइन। अनि यो सेल्फी खिच्नेहरूमा मात्र होइन त्यसबाट अरूमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेमा पनि निर्भर गर्छ।
राम्ररी सम्पादन गरिएका सेल्फीहरूले मानिसहरूको जीवfaceन रमाइलो छ भन्ने देखाउँछ। हामी सफल र पूर्ण जीवन बाँच्नेहरूका तस्बिरहरूले घेरिएका छौँ। पछिल्ला अध्ययनहरूका अनुसार त्यसले हामीलाई थप ईर्ष्यालु, एकलकाँटे, असुरक्षित र अपूर्ण रहेको अनुभूति गराउँछ।
फ्रोयडका शब्दमा यसले हामीहरूलाई ‘अझ विक्षिप्त’ बनाइरहेको छ। फ्रोयडले भनेका थिए, ‘मनोविश्लेषणको लक्ष्य भनेको विक्षिप्त हुनुलाई सामान्य मानवीय असन्तुष्टिहरूले प्रतिस्थापन गर्नु हो।’
अब सेल्फी लिँदा तपाईं पनि नार्सिससलाई सम्झनुहोस् र त्यसको साटो आफ्ना साथीहरूतिर ध्यान दिनुहोस्। सम्भवतस् तपाईंले चाहेजस्तो ‘लाइक’ त नपाउनु होला, तर फ्रोयडको अनुमोदन भने पक्कै पाउनुहुनेछ र त्यो तपाईंका लागि पर्याप्त हुनुपर्छ।